Yekushanya Svondo Yekuzivisa Kwekutarisa kune Tourism yekuwedzera Inosanganisira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Yekushanya Svondo Yekuzivisa Kwekutarisa kune Tourism yekuwedzera Inosanganisira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Jamaica inopemberera Zuva Renyika Rekushanya
Iyo Jamaica Ministry of Tourism, masangano ayo eruzhinji, uye vashanyi vekushanya, kusanganisira iyo Jamaica Hotel uye Yevashanyi Association (JHTA), vachange vachiratidzira basa rakakosha rinoitwa nekushanya mukukurudzira kubatanidzwa uye kukura kwehupfumi sezvavanocherekedza Svondo Yekuzivisa Kwevashanyi (TAW) 2021.
Chiitiko chegore rino chichava kupemberera kugona kwekushanya kutungamira budiriro inosanganisirwa uku uchiwanisa mikana yemamiriyoni pasirese.
Muvhiki rese, Ministry inoshandisa iyo yekudhinda neyemagetsi midhiya kusimudzira akati wandei maitiro avo.
Zvimwe zviitiko zvinosanganisira chaiyo expo munaGunyana 27, chaiyo konzati muna Gumiguru 1, uye wechidiki vhidhiyo makwikwi.
Kuchengetwa kwegore rino kuchasanganisira Zuva reWorld Tourism Day, iro rinocherechedzwa gore rega munaGunyana 27 neUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO) nenzvimbo dzinoenda pasirese. Zuva iri richacherechedzwa pasi pedingindira rinoti "Tourism for Inclusive Growth," rinozoshandawo semusoro weTAW 2021, wakatemerwa kutanga muna Gunyana 26 kusvika Gumiguru 2.
Chichava chiitiko chekupemberera kugona kwekushanya kutungamira budiriro inosanganisa uchipa mikana yemamirioni mazhinji pasirese.
Sekureva kweUNWTO: "Uyu mukana wekutarisa kupfuura manhamba ekushanya uye kubvuma kuti, kuseri kwenhamba dzese, kune munhu ... Kupemberera kugona kwakasiyana kwekushanya kuona kuti hapana munhu asara kumashure apo nyika inotanga kuvhurika zvakare uye kutarisa kusvikira kunguva yemberi. ”
Vhiki rino richatanga nemusangano chaiwo wechechi musi weSvondo, Gunyana 26. Muvhiki rese, Ministry pamwe nemasangano eruzhinji vachashandisa iyo yekudhinda neyemagetsi midhiya kusimudzira akati wandei ezvirongwa zvavo zvinokurudzira kukura kusanganisa. Zvimwe zviitiko zvinosanganisira chaiyo expo munaGunyana 27, chaiyo konzati muna Gumiguru 1, uye wechidiki vhidhiyo makwikwi.
Gurukota rezvekushanya Hon. Edmund Bartlett anocherekedza kukosha kwenyaya iyi, uye akagovana kuti chinangwa cheHurumende yake, "chagara chiri chekugadzira chigadzirwa chekushanya uko mabhenefiti makuru akagoverwa zvakaenzanirana munharaunda." Akasimbisa kuti: "Kushanya kwakanyanya nezve murimi, mutengesi wemhizha, muvaraidzi, uye mupi wekufambisa sezvazviri pamusoro peanotengesa hotera, muresitorendi, uye anokwezva."
“Tourism ndiyo imwe yemabhizimusi makuru uye ari kukurumidza pasi rose uye ndiyo inoitisa nyika zhinji mari. MuJamaica, kushanya ndicho chingwa chedu uye bota. Tourism ndiyo injini yeupfumi hwedu. Iyo inogadzira mabasa, inokwezva kudyara kwekunze, inotyaira kusimudzira kwezvivakwa zvakakosha, uye inosimudzira kutengeserana munzvimbo dzakawanda. Zvinotonyanya kukosha, zvinokurudzira kukura kweupfumi pamwe nekufamba kwevanhu, ”akawedzera.
Kunyangwe kukura kwechikamu ichi kwakakanganiswa zvakanyanya ne COVID-19 denda, iro rakatadzisa zviitiko zvehupfumi hwenyika, Bartlett akasimbisa kuti kugadzikana uye kusanganisa zvakakosha mukugadzirisa.
“Sirivha ndeyokuti dambudziko reCOVID-19 ratipa mukana wekuti tifungisise nekuvaka zvakare indasitiri iyi kuti tikwanise kuita basa iri. Sustainability uye kusanganisa zvinoenderana neyakaitika nzira. Naizvozvo, apo patinotora mikana iri mudambudziko, tiri kushandisa nzira dzakakosha dzekuvaka zvakare chigadzirwa chakachengeteka, chakaenzana uye chinopa mikana yezvehupfumi kumaJamaica, "akadaro.